Sat, May 26, 2018 | 11:47:11 NST
गर्मी महिनामा धेरै आगलागीको घटना बढ्ने हुँदा, यस समयमा जनचेतना र अन्य सशक्त कार्यक्रम हुनु पर्छ, हैन भने यसरी नै धेरै आगलागीका घटना भइरहने छन् ।
मेरो बुवाले हामीलाई आफैंले पढाउने स्कुलमा पढाउनुभयो । किनकी परिवर्तन आफैंबाट सुरु गर्नुपर्छ । अनि भाषणमा होइन व्यवहारमा देखाउनुपर्छ ।
सरकारी विद्यालयका शिक्षक आफैं सरकारी स्कूलमा पढाइ राम्रो हुँदैन भन्दै छोराछोरीलाई बोर्डिङमा पढाउँछन यसको मतलव हामी राम्रो छैनौं नै भनेको हो नी त ।
दीपक ढुङगाना, नामसालिङ, इलाम
विदेशमा सिकेको सीप सदुपयोग गरौं
जे छ पैसामै छ दुनियाँ । विदेश जानेहरुको आर्थिक स्थिति गाउँका अरुको तुलनामा अल्ली राम्रै हुन्छ । विदेश गएर आएपछिको केही समयको हाइफाई अर्कै हुन्छ तर एकदुई दिनमा उस्तै । कमसेकम विदेशमा सिकेको सीप, जोश जाँगर र राम्रो कामलाई पछ्याए राम्रै हुन्थ्यो । तर अहिलेसम्म त्यो देखिन्न ।
नेताहरु तिनै हुन, गफ दिने बानी परेका । अझै स्थानीय चुनावका विषयमा ४/५ महिना गफ नै दिने हो । चुनाव अर्को चैतसम्ममा गर्लान की ।
जेठ असारमा स्थानीय चुनाव हुन्छ भन्ने नेताले कम्तीमा कानून र मौसमको त जानकारी राख्नुपर्ने हो । त्यति पनि नसोची भाषण गर्नेलाई कसरी नेता भन्ने ?
पदम अर्याल, गुल्मी
जनतालाई सरकार छ भन्ने प्रत्यभूति दिलाउन पनि चुनाव हुनै पर्छ । विकासको लागि छुट्याईएको बजेट खर्च हुन नसक्दा फिर्ता भई रहेको स्थिति छ ।
स्थानीय चुनावभन्दा संविधान निर्माणमा केन्द्रित हुनु राम्रो
तत्काल स्थानीय चुनाव गर्नु भन्दा संविधानमा केन्द्रित भई संविधान जारी गरेपछि स्थानीय चुनाव गर्दा राज्यलाई भार पर्ने थिएन । एक बर्षमा संविधान बनाउने भनेर नेतहरुले बाचा पनि गरेका छन तत्काल स्थानीय चुनाव गर्दा नेताको ध्यान संविधानमा नगई चुना मा केन्द्रित हुनाले संविधान जारी भएपछि स्थानीय चुनाव गर्दा बेस होला कि ।
अब सुशासनको अभ्यास स्थानीय स्तरबाटै हुनु पर्छ त्यसको लागि चुनावको बिकल्प छैन । जनताको पहिलो सत्ता भनेकै यही हो जसमा सबको पहुँच छ ।
नेपालको औषधि हामी नेपालीले प्रयोग गर्न नसक्ने गरि महँङगो छ । त्यसैले सबैले प्रयोग गर्न सक्ने बनाउनु पर्‍यो
विदेशी औषधि प्रयोग गर्नु त हाम्रो बाध्यता हो । औषधिजन्य वस्तुहरुको पहिचानका लागि अनुसन्धान गर्नुपर्छ अनि औषधि प्रशोधनका लागि कारखाना खोल्नुपर्छ
दुर्गा लिम्बु, पाँचथर
औषधिलाई कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ र?
नेपाली औषधिका बारेमा हामी त्यति जानकार छैनौं । अनि विश्वासको त कुरै छोडौं, औषधिहरुको न त म्याद उल्लेख गरिएको हुन्छ न त पर्याप्त जानकारी नै । अनि म्याद सकिन लागेका औषधि गाउँतिर पठाइन्छ अनि कसरी विश्वास गर्नु ?
औषधि किन्दा स्वदेशी हो कि बिदेशी भनेर हेर्ने कुरा भएन। मेडिकलमा किन्दा जे दिन्छ त्यही खाईन्छ।
औषधिको प्रचार, आपूर्ति र गुणस्तरमा सुधार गर्न सक्यो भने नेपाली औषधि पनि विदेशी भन्दा कम हुँदैन ।
देशमा विदेशी लगानी ल्याएर के गर्ने केहीले रोजगारी पाएपनि नाफा जति सबै विदेशमै जाने हो । त्यसैले विदेशी लगानी भन्दा स्वदेशी लगानी नै बढाउनुपर्छ यस्तो भए रोजगारी पनि आफ्नै नाफा पनि आफ्नै ।
सरिता थारु, कपिलबस्तु,
नेपालले अहिलेसम्म मापदण्ड अनुसार के नै बिक्री बितरण गरेको छ र ? औषधि चैं मापदण्ड अनुसार हुनु । झन त्यो माथि औषधि स्वस्थ मानिसलाई अस्वस्थ बनाइ दिन्छ ।
नेपालमा खोलिएका सामाजिक संस्था मध्ये थोरैले मात्रै नियमको पालना गरेका छन तर अरुले दुरुपयोग
दिपेन पन्थ, तनहुँ
सबै सामाजिक संघसंस्था एनजिओ र आइएनजिओले चलाएका छन त्यसैले यस्ता संस्थाको कामको सरकारले अनुगमन गरी मिडियामा सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।
सामाजिक संघ संस्था भनेको कुनै आलु हैन एउटा कुहिएमा सबै कुहिने
गैर सभासदलाई मन्त्री बनाउने विषयमा यो सरकार त धेरै सच्चिएछ । अहिले त मन्त्री मात्रै पहिले त सभासद नै नभएको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीका लागि त मनोनयन गरिएको थियो । अव चैं क्यै होला जस्तो छ ।
मित्रलाल भट्टराई,उदयपुर बेलटार,
मोदी फर्किएसँगै फेरि गन्हाउन थाल्यो जनकपुर !
धनुषा, जेठ १२ – जनकपुरधाम मिथिलाको प्राचीन राजधानी एवं वर्तमान प्रदेश नं. २ को मुकाम हो । तर मरेको गाईवस्तु , सुँगुर, कुकुरलगायत फोहर व्यवस्थापन नहुँदा जनकपुर प्रवेशद्वारसंगै नगरको विभिन्न ठाउँ दुर्गन्धित हुने गरेको छ ।
​पोखराको मणिपाल अस्पतालमा सेवा ठप्प, अझै खुल्ने छाँट छैन
​बाल्टीको पानीमा डुबेर पाल्पामा एक बालकको मृत्यु
​माइकल ज्याक्सनको डान्सको रहस्य उनको जुत्तामा !
सुन तस्करी काण्डका मुख्य अभियुक्त गोरेको बयान लम्बियो